कुखुराको मूल्य प्रतिकिलो ११० मा झर्याे, मारमा किसान ! – Dainik Samchar
May 19, 2021 455
ब्वयलर कुखुराको मासुको मूल्यमा निकै गिरावट आएपछि किसानले प्रतिकिलो रु ९५ हाराहारी नोक्सानी व्यहोर्नु परेको छ। उत्पादन बढी र खपत कम भएपछि मूल्य घटेर किसानले घाटा व्यहोर्नु परेको हो। नेपाल ब्वायलर कुखुरापालक किसान सङ्घका अध्यक्ष झनक पौडेलका अनुसार अहिले ब्वायलर कुखुरा प्रतिकिलो रु ११० हाराहारीमा बिक्री हुने गरेको छ। जसको लागत मूल्य प्रतिकिलो रु २०५ रहेको उनको भनाइ छ। कुखुरा नबिकेपछि कतिपय जिउँदो प्रतिकिलो रु ९० मा बिक्री
गर्नुपरेको गुनासो किसानले गरेका छन्।** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तलकाे लिंकमा क्लिक गर्नुहोला **
तयारी मासु प्रतिकिलो रु १७५ मा समेत बिक्री हुने गरेको छ। चितवनमा प्रतिकिलो रु २०० र काठमाडौँमा रु २२० दररेट राखेर मूल्य सार्वजनिक गरेको पाइन्छ। धेरै कुखुरा हुनेले सो मूल्यभन्दा कममा नै बिक्री गरेका हुन्। पौडेलले वाणिज्य विभागलगायतका सरोकारवाला निकायमा शुक्रबार निवेदन दिएर बजार अनुगमन गर्न अनुरोध गरिएको बताए। देशभर एक सयदेखि १०
हजारसम्म ब्वायलर कुखुरा पाल्ने किसान ४५ हजार हाराहारी छन्। अहिले उत्पादन भएको कुखुराको चल्ला किन्दा किसानले रु ६५ तिरेका थिए। सरदर प्रतिकिलो रु ३० को दाना खुवाएको उहाँले जानकारी दिए। नेपाल दाना, अण्डा, कुखुरा वितरक सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष जेतनारायण पाण्डेले साना किसान धेरै प्रभावित बनेको बताए। उत्पादन नै बढी हुँदा समस्या भएको उनको भनाइ छ। उत्पादन बढी र खपत कम हुँदा दुई किलो भएका कुखुरा खोरबाट उठाउनुपर्नेमा तीन किलो पाँच सय** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तलकाे लिंकमा क्लिक गर्नुहोला **
Prevको’रोनाले जुम्ल्याहा दाजुभाइको एकैपटक मृ त्यु, साथमा जन्मिए, साथमा बाँचे र साथमै म’ रे
Next१८ दिन अघिमात्र विहे गरेर आएकी थिईन् २२ वर्षीकै उमेरमा सोमबार राति मृ’त्यु, एक्कासी विरामी भएकी उनी चितामा हराईन् !
रामकुमारी झाँक्रीको मर्यादा हिन टिप्पणी ‘संविधान त राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र केपी ओलीको प्रेमपत्र लेखिएको डायरीजस्तो भयो’
एकै विद्यालयका ३९ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
विदेश जान इच्छुक नेपालीका लागि आयो यस्तो सूचना
दाङबाट काकडभिट्टा जाँदै गरेको बस सर्लाहीमा दुर्घ,टना
जनता टाइम्सका संपादक शान्तिराम कार्कीको निधन (596)